Guri kuyaala Muqdisho oo lagu beeray Daroogo halis iyo Booliiska oo soo qabtay | Arrimaha Bulshada
Home News Guri kuyaala Muqdisho oo lagu beeray Daroogo halis iyo Booliiska oo soo qabtay
Guri kuyaala Muqdisho oo lagu beeray Daroogo halis iyo Booliiska oo soo qabtay
Bulsha:- Ciidamada booliiska ayaa howlgal qorsheesan oo ay xalay fuliyeen xaafada Tookyo ee degmada Howlwadaag waxa ay ku heleen guri lagu beeray waxyaabaha maankadooriya gaar ahaan xashiishka nuuca ugu qatarsan ee loo yaqaan Murjawaanaha.
Ciidamada booliiska ayaa guriga ay howlgalka ka sameeyeen sidoo kale kusoo qabtay haaman laga buuxiyay calaqa macmalka iyo waxyaabo kale oo maankadooriya, ciidamada ayaa sidoo kale soo xiray dadkii lahaa waxyaabaha maankadooriya.
Taliyaha Saldhigga Booliska Degmada Howlwadaag Najiib Cabdi ayaa sheegay in ciidamada booliiska fuliyeen howlgalka ay kusoo heleen guriga lagu beeray dhirta laga sameeyo xashiishka nuuca ugu halista badan ee Murjawaanaha.
“Ciidamada ayaa gacan ka helay bulshada deegaanka waxayna taasi suuragalisay in gacanta aan ku soo dhigno waxyaabaha maankadooriya iyo Dhirta Xashiishka oo lagu beeray mid kamid ah dhismayaasha Xaafadda Tookiyo iyo Caagado lagu karkarinayay Maandooriyaha Calaqa” ayuu yiri taliye Najiib Carab.
Muqdisho ayaa waxaa kusoo badanaya guryaha lagu sameeyo laguna iibiyo waxyaabaha maankadooriya kaa oo dhibaato badan ku hayay dhalinyarada Soomaaliyeed, waxaana maalmahan socday howlgalo ciidamada amaanka kula dagaalayeen maandooriyaha.